Xirashada kombiyuutarka - waa maxay? Sidee loo sameeyaa? Waa imisa Sidee loo qiyaasaa?
Kombuyuutar gacmeed waa habka ugu caansan uguna sharaf badan dharka qurxinta. Waxay ka kooban tahay daabicitaan qoraal, calaamad ama astaamo leh isticmaalka dunta iyo mashiin kombuyuutar xakameynaya oo maanta beddelay farsamada gacanta.
Waxaan kuxiran karnaa macno ahaan wax walba iyo wax walba. Xirashada kumbuyuutarrada ayaa si guul leh loogu isticmaalaa dhammaan noocyada dharka, iyagoo abuuraya dhar shirkadeed oo gaar ah. Dharka ay xirtaan shaqaalaha shirkadu waxay dhistaa aqoonsigiisa, sumadiisa iyo dareenka bulshada. Dhamaan shaqaaluhu, sida ciyaariyahanada kubbada cagta labiska, waxay ku ciyaaraan hal koox.
Booqo dukaankayaga internetka ah >>
Xirashada kumbuyuutarka ayaa sidoo kale si guul leh loogu isticmaali karaa in lagu abuuro qalabyo iyo dharka xayeysiinta. Astaanta xiran iyo magaca shirkadda funaanadaha iyo funaanadaha macmacaanka waxay hadiyad fiican u noqon karaan macaamiisha. Markaad xidhato dharkayaga xayeysiinta, waxay horumarin doonaan sumadeena.
Si kastaba ha noqotee, daabacaha kumbuyuutarka looma isticmaalo dharka oo keliya. Waxa kale oo aad ku dhejin kartaa kombiyuutarka kumbuyuutarka koofiyadaha, bacaha, shukumaano, dharka dhalada iyo dharka shaqada.
Astaamaha xirxiran iyo qoraalada qoraaladu aad ayey uga dheereeyaan kuwa si fudud looga saari karo iyo kuwa lugaha saarta oo ku dhegan, kuna dhegan dharka sida jajabyada caadiga ah.
Xirashada kombiyuutarka - taariikhda daabacaadda dharka xayeysiinta
Dumarkii horeba, dumarku waxay kuxiran yihiin qaababka dharka iyo miisaska gacmaha.
xijaab badiyaa waa cunsur dhaqan iyo astaan ​​u ah gobol iyo ummad la siiyay. Waa ku filan tahay in lagu xasuusto majaajiliistaha caanka ah ee Kashubian ama hilibka dusha sare, kuwaas oo ah shey aan la kala saari karin oo ah dharka dadka.
Si dadka looga dhex muuqdo qaabkan, iyo sidoo kale in si garaaf ahaan loo garto kooxaha dadka, si dhakhso ah ayey u adeegsadeen suuqgeynta iyo khubarada PR. Shaqaalaha ku labisan dharka ku habboon ee la xushay ayaa macaamiisha ula dhaqma si ka duwan. Tusaale ahaan, sida duuliyeyaasha, booliiska iyo askarta loogu ixtiraamo lebbiskooda qurxoon, shaqaalaha warshadaha kale ayaa loo arkaa gebi ahaanba si ka duwan labbiska iyo noocyadooda kala duwan. La yaab ma laha in shirkado badani go'aansadeen inay maalgashi ku samaystaan ​​yunifoom gaar ah. Thanks to this, shaqaalahoodu waxay dareemi karaan sida hal koox, inay isla ciyaaraan ujeedo isku mid ah.
Xaraashku sidoo kale waa qalabyo iyo dharka xayeysiinta. Qof walbaa wuxuu jecel yahay hadiyado, freebies ama abaalmarinno. Haddii uu helo boorso, dabool ama funaanad leh sumad shirkad ah, runti wuu xiran doonaa, sidaas ayuu ku xayeysiiyaa sumadda.
Horumarinta dhaqaalaha iyo caalamiyeynta sameeyey baahida loo qabo xijaabka koraan sanad walba. Nasiib wanaagse, hormarinta farsamooyinka kumbuyuutarka ayaa gacan ka geystay kobcinta fursadaha. Waqtiga xaadirka, qorista qoraalada iyo qaababka noocyada kala duwan ee dharka iyo waxyaabaha kale ee laguxiro ayaa hadda ah mid dhakhso badan, sax ah, sax ah, soo celin karo oo raqiis ah. Maanta, kumanaan kun oo xargaha ah ayaa la sameyn karaa iyada oo aan wax dhibaato ah, waqti gaaban, waxay la kulmi doonaan xitaa rajooyinka ugu weyn.
Sidee loo sameeyaa xirmo kombuyuutar?
Xirashada kombiyuutarka - tikniyoolajiyada qorista qoraalada dharka
Mashiinada casriga ah waxaa ku qalabeysan dhowr iyo toban cirbadood iyo dunta midabbo kala duwan. Habka tolidda waxaa maamula barnaamij kombiyuutar. Iyada oo ku saleysan naqshadeynta la geliyay, mashiinku wuxuu gooyaa xarfaha ku habboon iyo qaababka.
Sida loo naqshadeeyo dharka daabacaadda, dhejiska
Waa ku filan tahay inaad go’aansato meesha ama meesha shayga aad rabto inuu dusha maro. Intaa waxaa sii dheer, waxaad u baahan tahay inaad doorato qaabeheeda iyo cabirkeeda. Badanaa, qoraallo leh qoraallo ku habboon iyo astaannada shirkadaha iyo xarumaha ayaa la daabacaa. Qaabka waa in loo diro iyadoo la amrinaayo, khubaradeenna takhasuska leh waxay gacan ka geysan doonaan la qabsiga baahiyaha mashiinka tolidda kombiyuutarka.
Faa'iidooyinka iskuxirka kombiyuutarka
Muuqaalku waa shay ka dhigaya dharka leh astaan ​​gacmeed furan. Si taxaddar leh oo loo sameeyay soo-saareynta waxay siisaa waxyaabo tayo wanaagsan. Waxaa laga dareemayaa taabashada, si fudud. Xirashada kombiyuuterka waxay bixisaa dhar iyo waxyaabo la mid ah qaab iyo xarrago, oo astaanta ay xayeysiisay ay ku gaadhay sharaf. Bal ka fikir laba funaanado, mid leh astaan ​​shirkad leh oo taxaddar leh kan kalena leh sawir xayeysiis ah oo ku dheggan. Muuqaalka noocan oo kale ah wuxuu maskaxda ku soo dhigayaa isku dhafka ah ee Mercedes, xarrago leh oo qurux badan oo ku xigta caag iyo taariikh jaban.
Sidaas darteed, cimri dherer ahaan majaajilaystaha kumbuyuutareedku aad ayey uga fiican yihiin kuwa la tartamaya. Xaraashku wuxuu leeyahay ku dhawaad ​​isku cimri dherer sida dharka ay qurxiyaan. Looma baahna in laga walwalo in astaanta ama qoraalku uu ku qubmayo marka la maydho ama bir lagu qubeysto. Xirashada kombiyuuterka waa qeyb muhiim ka ah dharka, mana ahan oo keliya waxyaabaha si fudud looga saari karo, qalabka aan joogtada aheyn ee muuqaalkiisu si dhaqso ah u liito.
Xirashada kombiyuutarka waxay noqon kartaa midab kasta. Xaddidaadda kaliya waa midabka dunta loo isticmaalo. Isku-dhafka waxaa lagu sameeyaa qalliin saxan iyadoo ay ugu wacan tahay xakameynta kumbuyuutarka.
Xaraashka ayaa si shaqsiyan loo shaqaysan karaa. Teknolojiyadda kumbuyuutarrada waxay u oggolaaneysaa saxda, ku-celinta iyo xallinta qaraarka sare ee astaamaha, astaamaha iyo qoraallada.
Iyada oo heerar sare ah, soosaaro si fudud ayaa dhaqaale ahaan looga bixiyaa. Qiimaheeda ayaa aad u hooseeya, taasoo ka dhigaysa mid ku habboon qurxinta dhammaan noocyada dharka - shaati, shaati, surwaal, surwaallo, gaagaaban - iyo sidoo kale tuwaallo, koofiyado iyo bacaha.
Faa'iido darrooyinka kombiyuutarka
Waxay ka soo horjeeddaa daabacaadda kumbuyuutarka ee dusha sare ah, waa wax aan suurtagal ahayn in lagu dhejiyo sawir dhammaystiran oo leh palette midab aan xadidnayn. Si kastaba ha noqotee, tani ma aha waxa ay ku saabsan tahay. Dhar-qurxintu waa tixraac dhaqan, oo ah sumcadda sharaf, maxaa yeelay waxay la xiriirtaa jaakadaha hubka ee qurxinta dharka bulshada sare. Wax shaqo ah kuma lahan kitschy, rinji iyo midabo ranjiyeyn ah.
Xaraashka kumbuyuutar ee dharka ugu tayo hooseeya oo leh miisaan hoose oo aan lagu dhejin karin. Waxaa loo malaynayaa in naxwe ahaan in loo yaqaan 'textiles' inay ka weynaan karto 190 g / m2. Si kastaba ha noqotee, way adag tahay in xitaa la qiyaaso astaan ​​xirxiran funaanad qaali ah oo aad u dhuuban oo wax walba lagu muujinayo.
Xirashada kombiyuutarka - alaabada caanka ah iyo dharka xayeysiinta
Shaatiyo Polo leh qaab gacmeed leh
Xiriirkii ugu horreeyay ee ay la leeyihiin wax lagu qoro? T-shirt leh koodhadh iyo astaan ​​qurxoon oo xabadka saaran. Isku darka xarrago iyo xirashada raaxada. Ka dhig dadka inay ku farxaan inay xirtaan funaanadaha noocan oo kale ah sumadda shirkaddaada ama hay'addaada.
Shaati-gacmeedka oo leh astaan ​​shirkadeed xidhan iyo qoraallo qoran
Diyaar u ah inay xidhaan maalin kasta. U oggolow shaqaalahaaga ama macaamiishaada inay xayeysiiyaan sumaddaada xiran gacmo gaagaaban oo lagu qurxiyay astaantaada ama qoraal ay ku dhiirrigelinayaan inay adeegsadaan adeegyada shirkaddaada.
T-shirts oo daabacan
Shaati tayo sare leh iyo shaashad kumbuyuutareed ku xiran ama qoraal ah ayaa isku dhafan oo kuu oggolaanaya inaad ka soo baxdo funaanadaha badan ee xayeysiinta Shiinaha oo leh tayo hooseysa oo waarta.
Sweatshirts oo leh qaab gacmeed
Hoodie caadi ah ayaa waliba xayeysiin kara badeecadaada ama sumaddaada. Ku dhaji eraygaaga sirta ah, magaca iyo / ama astaanta astaanta macmacaanka.
Xirashada kombiyuutarka ee dhogorta
Ma waxaad dooneysaa in shaqaalahaagu noqdaan kuwo diirimaad leh isla mar ahaantaasna shirkada ku caddeeya dharkooda? Mise waxaad rabtaa inaad u abuurto dhar xayeysiin tayo sare leh shirkaddaada? Dharka kumbuyuutareedka lagu xirto ee kumbuyuutarka ayaa ah ikhtiyaar weyn.
Shaati gashanaya kumbuyuutar
Si rasmi ah oo qurux badan? Ka dhig shaqaalahaaga inay macaamiisha ugu adeegaan dhar qurux badan oo leh astaan ​​shirkadeed xidhan. Xullo joodariga kumbuyuutareedka lagu xirto funaanadaha.
Kontaynarka iyo gaagaaban oo leh daabacan
Kaliya dharka sare kaliya kuma filna iskuxirka qoraalka ama qaabka. Ku dheji surwaal ama surwaal si ay u abuuraan dharka xayeysiinta gaarka ah.
Xirmooyinka kumbuyuutarka ee koofiyadaha lagu dhejiyo
Way adag tahay in la qiyaaso koofiyadaha kubbadda koleyga oo aan lahayn astaanta xiddigta ee kooxda aad jeceshahay, jaamacad ka qalin jabisay ama magac astaan ​​u leh. Samee sumadda hay'addaada ama shirkadda indhaha ku qabta. Ku dheji koofiyadaha.
Goomayaasha iyo dharka dharka lagu xardho oo leh sawir muuqaal ah iyo qoraal
Waxba kuma kala saari doonaan hudheelka iyo HBS inta ugu badan ee loo yaqaan 'tuwaallo' iyo musqulo-maydh. U beddelo magac la'aan, shukumaannada caajiska ah shay u gaar ah oo xoojinaya raaxada astaantaada. Waa sharaf adiga, laakiin sidoo kale waa dareen raaxo leh martidaada.
Boorsooyin ay ku jiraan majaajillo kombiyuutar
Sidee si fudud loogu calaamadeeyaa boorso leh magaca iyo sumadda shirkadda? Xirashada kombiyuuterka si fiican ayey u shaqeysaa. Si dhakhso ah oo dhaqso badan, boorso caadi ah ayaa loo rogi karaa astaamo shirkadeed.
Dharka digniinta iyo xirmo kumbuyuutar
Dharka shaqadu sidoo kale wuxuu u shaqeeyaa sidii shirkad kumbuyuutar ka sameysan kombiyuutarka. Magaca, shaqada, magaca shirkadda iyo astaanta - dusha sare ee ku habboon shayga ama qaybaha kale ee takhasuska leh ee shaqada iyo dharka muuqaalka sare.
Xirashada kombiyuutarka - Immisa ayey ku kacaysaa?
Kombuyuutar gacmeedku waa raqiis. Si kastaba ha noqotee, way adag tahay in si sax ah loo caddeeyo qiimaha hal mar keliya, maxaa yeelay cabbirro badan ayaa saameeya kharashkan.
Xaraashka kumbuyuutarka ayaa shaqsiyan ka raqiisan doona amarrada waaweyn. Qiimaha ayaa sidoo kale saameyn ku leh cabirka aagga in la xiro, nooca xuubka laftiisa, cufnaanta qaabka dusha sare, tirada cirbadaha halbeeggii halkii cm.2 sheyga, iyo sidoo kale tirada meela ay tahay in laxirxiro oo lagu dhejiyo sheyga.
Qiimaha badanaa saameyn kuma yeesho tirada midabada loo adeegsaday, maadaama mashiinka tolo ay ku leeyihiin silsilado badan.
Waxaan kugu casuumeynaa qiimeynta shaqsiyadeed ee mashaariicda. Fadlan noo soo dir sawirada sawirada aad rabto inaad soo daabacato iyo macluumaadka ku saabsan tirada gogosha la samaynayo.
Waa maxay daabacaha kumbuyuutarkaWaa maxay daabacaada kumbuyuutarkameesha laga sameeyo kombiyuutar dhajin ahdaabacaadda kumbuyuutarkakumbuyuutar ku shaqeeya kombuyuutareedka loo yaqaan 'Białystok'daabacaadda kumbuyuutarrada BielskoKombuyuutar gacmeed lagu sameeyay bydgoszczqiimaha koombiyuutarkaliiska qiimaha xirmada kombiyuutarkaxirashada kombiyuutarka maxay tahayxirashada kombiyuutarka maxay tahaykumbuyuutar ku shaqeeya kombiyuutarka ee Częstochowakombiyuutar gashańskKombuyuutar gacmeed lagu sameeyay Gdyniagliwice compresserized combiyuutarkaGniezno compresserized combineryXaraashka kumbuyuutarka immisa ayey ku kacaysaaXirashada kombiyuutarka ayaa u egdaabacaadda kumbuyuutarka sida loo bilaabokumbuyuutar sida loo sameeyokombiyuutarka dhajis ah waxa mashiinkadaabacaadda kumbuyuutarka maxay pkdcomputerized embroidery Kaliszcomputerized embroidery embroidery katowiceKombuyuutar ku shaqeeya kombuyuutar kielcexirmo kombiyuutarka Koninkoofiyadda kumbuyuutarka ee KoszalinKombuyuutar gacmeedka kombuyuutareedka Krakowkumbuyuutar doon lagu xiroLiiska qiimaha doonyaha kumbuyuutarkaKombuyuutar gacmeedyo kumbuyuutareedka Lublindaabacaadda kumbuyuutarka ee shaati-gacmeedkashaashad kumbuyuutar dhejis ahSoodhadhka kombiyuutarka ee Nowy SączKombuyuutar ku shaqeeya kombiyuutarka oo ku yaal Olsztyndaabacaadda kumbuyuutar ee Opolepabianice compresserized combiyuutarkapoznań kombiyuutarrada kombuyuutarrada ku shaqeeyakombiyuutarka dharka lagu xirodaabacaadda kumbuyuutarka ee RybnikKombuyuutar ku shaqeeya kombiyuutarrada reichscomputerized embroidery SilesiaKombuyuutar gacmeed kumbuyuutar Słupskkumbuyuutar ku shaqeeya kombiyuutarka ee Sosnowieckombiyuutarka combiyuutarka swarzdzXirmooyinka kumbuyuutarrada ee kombiyuutarkaDaloollada xijaabka kombiyuutarkadaabacaha kumbuyuutar ee TarnówQalabka kombiyuutarka ee kumbuyuutarrada ku shaqeeya ee Toruńwarshad kumbuyuutareed warsawLiistada qiimaha shaashadda kombuyuutar warsawkumbuyuutar xirto kombiyuutareed cadcławQaababka kumbuyuutarkabuurta cagaarka ah ee kumbuyuutarkaImmisa ayaa qiimahoodu ku xiran yahay kumbuyuutarkasida loo sameeyo daabacaadda kumbuyuutarkasida loo qiimeeyo kombiyuutarkawaxa kumbuyuutarku u eg yahaysida loo sameeyo kumbuyuutar kombiyuutarsida loo jeexjeexo dharka kombiyuutarkasida loo naqshadeeyo dharka kombiyuutarkasida loo sameeyo kumbuyuutar kombiyuutarFunaanadodaabacaadodharka xayeysiintatolidda
nashqadeynta iyo fulinta: Pixels Wanaagsan